iMovie Sound Raadka - Sida loo dar Sound Raadka in iMovie 08/09/11 i
Codka cute u muuqataa waqtiga saxda ah ee aad video aad video noolayn karin. iMovie waxay bixisaa dhowr ah oo saamaynta codka si aad u codsato in aad video clips iyo mashruuca. Iyadoo iMovie codad, waxaad ku dari kartaa oo xiiso leh si aad u videos oo ku daray saamayn dhawaaqa in iMovie waa mid aad u fudud.
Tallaabada 1. Fur mashruuca iMovie aad.
Haddii aadan helay mashruuc, bilowdo mid ka mid ah oo ag maraya in ay File> New Project. Haddii aadan ku daray in videos iMovie Event browser, videos load ag maraya in ay File> Import> Movies ama videos dejinta inay iMovie ka fiidiyo oo ku xiran in aad Mac.
Tallaabada 2. Dooro saamayn codka
Guji ku Music iyo button Sound Raadka in la furo Music iyo suuqa kala Sound Raadka. Halkan waxa aad ka arki kartaa badan oo codad aad u isticmaali karto. Waxaad dooran kartaa ka iMovie Sound Raadka iyo iLife Sound Raadka. Riix badhanka play ee bidix si ay ku eegaan dhawaaqa kasta. In beerta raadinta, in aad ku qor kartaa magaca saamaynta dhawaaq si deg deg ah u ogaatid.
Dooro mid ka mid ah oo aad jeceshahay, oo jiidin video clip ee Project ee meesha aad rabto codka si ay u bilaabaan. Markaas saamayn codka ka dhex muuqan doonaa cagaaran video clip hooseba. Waxaad jiidi karaan slider in ay bedelaan dhererka saamaynta dhawaaqa.
Tallaabada 3. Dheellitir saamaynta codka
Double guji clip dhawaaqa iyo suuqa kala Isbatooraha ka fura. Waxaad bedelno clip mudada dhawaaqa gacanta iyo saamaynta dhigay audio. Hit "Audio" tab si aad u hesho hawlaha Customization dheeraad ah.
Waxa kale oo aad ku dari kartaa music soo jeeda si ay u iMovie in lagu daro dhadhan dheeraad ah oo ku darto saamaynta video in iMovie videos.
> Resource > iMovie > Sida loo dar Sound Raadka in iMovie